Agricultural Machinery, Dibanisa komvuni, Umbona Dibanisa umvuni - Zhonglian
Yeembotyi zesoya Hlanganisa ovunayo
Izixhobo ezitsha AGRICULTURE semfuno zakho
Corn hlanganisa ovunayo
Butter hlanganisa ovunayo
Ingqolowa / irayisi hlanganisa umvuni
Zhengzhou Zhonglian Harvest Machinery Co., Ltd na inkampani lemveliso professional hlanganisa komvuni ezithi zihlanganise uphando mveliso, iindawo nanceba ekhobokisayo, gcwalisa umatshini hlangana kunye nemveliso inkonzo yasemva kwentengiso. Le nkampani iye yasekwa ngo-1995 kwaye uhlala phakathi Zhiji Road of Xingyang mzi, kwiPhondo Henan. Le nkampani lugubungela malunga 150,000 yezikwere, kwaye abasebenzi abangaphezu kwe-500 kubandakanywa abaphathi zobugcisa 56 zobunjineli kunye namagcisa abanezakhono 67. Iimpahla zizonke ifikelela US $ 60 izigidi oluqulathe zokuqhuba Kuthi $ 25 ezigidi. Le kweempuku yequmrhu lamatyala liye lafikelela 2A + e-Industrial and Commercial Bank.
Ngeteknoloji nje undoqo, ukuphuhlisa nokuvelisa iimveliso ezikumgangatho ophezulu ngokweemfuno ezahlukeneyo emarikeni.
Idilesi: North of 310 wendlela kazwelonke, Yulong Town, Xingyang, Zhengzhou City, Henan kwiphondo, China